Onye isi ala Clinton na Minster Bartlett na-atụle Global Resimence Resilience na Crisis Management Center
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Onye isi ala Clinton na Minster Bartlett na-atụle Global Resimence Resilience na Crisis Management Center
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ Virgin Islands nke US
Onye Jamaica Minister for Tourism, the Hon. Edmund Bartlett, zutere taa na onye bụbu onye isi ala United States bụ Bill Clinton na nzukọ 4 na-aga n'ihu nke Clinton Global Initiative (CGI) Action Network na Post-Disaster Recovery na Mahadum nke Virgin Islands, St. Thomas, USVI.
Onye isi oche gosipụtara mmasị dị ukwuu n'ịkwado ndị a Global Resilience na Crisis Management Center. A na-akwado ndị isi njem nlegharị anya oge niile na Global Crisis Management Center na Jamaica ma gosipụta ya na mbido afọ a na Montego Bay site n'aka Hon. Onye ozi Bartlett n'oge Ahịa njem Caribbean nke 2019. Naanị n’izu gara aga, a mara ọkwa anọ ọzọ na Japan, Malta, Nepal, na Hong Kong.
Minista Bartlett ga-ekwupụta isi okwu na mmemme GCI na Tuesday ma atụ anya ịkọwapụta na Caribbean bụ mpaghara kachasị ọdachi n'ụwa. Imirikiti agwaetiti dị n'ime eriri mmiri ifufe nke Atlantic ebe a na-emepụta mkpụrụ ndụ ifufe, mpaghara ahụ na-anọdụ ala atọ na-arụ ọrụ ala ọma jijiji, mana ọ bụkwa mpaghara kachasị njem njem na ụwa.
Onye isi ala Bill Clinton na onye ode akwụkwọ nke United States Hillary Rodham Clinton nọ ugbu a na nzukọ nke anọ nke Clinton Global Initiative (CGI) Action Network na Post-Disaster Recovery na St. Thomas, US Virgin Islands. Nzukọ a, na mmekorita ya na Bloomberg LP na Love City Strong, ga-aga n'ihu na mkparịta ụka banyere mgbake ajọ ifufe na mpaghara Caribbean ka ukwuu, ma lebara isiokwu anya dị ka akụrụngwa, ọrụ ugbo, mmepe ndị ọrụ, ike na ume ọhụrụ, ahụike, na nka na omenaala Caribbean. .
Thezọ nke Network Network na-eme ka otu ìgwè dị iche iche nke ndị nwere mmasị na-emekọ ihe ọnụ iji gbalịsie ike na-ebute ndị mmadụ ụzọ, gụnyere ịkwado ọdịnihu dị mma site n'inyere obodo aka ịhazi na ịkwadebe maka oké ifufe n'ọdịnihu na nsogbu na-arịwanye elu nke mgbanwe ihu igwe.
Tourlọ ọrụ Global Tourism Resilience na Crisis Management Center, nke Mịnịsta Bartlett guzobere, yiri ka ọ bụ ezigbo otito maka ọrụ Onye isi ala US mbụ chịburu.